Taom-baovao malagasy - Wikipedia
Ny Taom-baovao malagasy dia ny fiandohan' ny taona malagasy sy ny fankalazana izany izay mitranga eto Madagasikara sy any ivelany koa amin' ny andro voalohan' ny taona voafaritra araka ny tetiandro malagasy na amin' ny fomba hafa.
Amin'izao taonjato faha-21 izao dia mizara ny hevitr' ireo mpankalaza ny taom-baovao malagasy. Ao ny mitazona ny daty amin' ny fizaran-taona fararano, izay heverin' ny mpomba izany hevitra izany fa mifanandrify amin' ny Alahamadibe taloha, ka mankalaza ny taom-baovao amin' ny volana Marsa na Avrily. Ao koa ireo mitana ny daty ao amin' ny lohataona ka amin' ny volana Septambra no ankalazana izany. Nisy fotoana niantsoana ity vanim-potoana faharoa ity hoe Volambita, araka ny anaram-bolana malagasy avy amin' ny teny sanskrity. Ao koa ireo manaraka ny tetiandro malagasy manara-bolana tanteraka ka tsy mihazona volana na daty gregôriana raikitra hankalazany ny taom-baovao malagasy, nefa mihevitra ihany koa izy ireo fa mifanandrify amin'ny tsinan' Alahamady izany fotoana izany.
Misy ny mihevitra izany tsy fifanarahan-kevitry ny mpankalaza ny taom-baovao malagasy izany ho olana tokony ho vahana, nefa ao koa ireo mihevitra izany fahamaroan'ny andro fankalazana izany ho fananan' ny Malagasy harena ara-kolontsaina.
Ny tena mafana fo amin' ny fankalazana ny taom-baovao, indrindra ilay heverina fa mifanadrify amin' ny tsinanana Alahamady, dia ireo lazaina fa taranak' andriana merina ao Antananarivo sy ny manodidina, nefa misy koa matetika ny fanasana ireo ampanjaka sy tangalamena sns avy any ivelan' Antananarivo.
1.1 Samy nanana ny tonontaona heveriny ho lehibe ny isam-paritra
1.1.1 Tao amin' ny Antanosy
1.1.2 Tao amin' ny Antemoro
1.1.3 Tao amin' ny Merina
1.2 Fivavahana sy pôlitika ary toekarena
1.2.1 Ny fankalazana manana fototra ara-pivavahana
1.2.2 Ny fankalazana miorina amin' ny pôlitika
1.2.3 Ny fankalazana mifandray amin' ny toekarena
2 Ny fankalazana amin' ny volana Alahamady
2.1 Ny tonon' andron' ny taom-baovao Alahamady
2.1.2 Fampifanandrifiana ny Alahamady merina amin' ny Alahamaly antemoro
2.2 Fanitsiana sy fampiasana daty sy anarana hafa
2.2.1 Fanitsiana faha Radama II
2.2.2 Fisafidianana daty hafa faha-Ranavalona III
2.2.4 Tamin' ny andron' ny fanjanahan-tany
2.3 Ny olana momba ny famaritana ny volana Alahamady ankehitriny
2.3.1 Volana Alahamady amin' ny farararo
2.3.2 Volana Alahamady miovaova fizaràn-taona
3 Ny taom-baovao fararano
3.1 Ny datin' ny fankalazana
3.1.1 Daty amin' ny volana Marsa sy Avrily
3.1.2 Ny tetiandro ampiasain' ny mpankalaza taom-baovao fararano
3.1.3 Tsy mijery volana na kintana intsony fa mampiasa solosaina
3.1.4 Fiverenana amin' ny volana Marsa sy Avrily
3.2 Fanamarinana ny taombaovao fararano
3.2.1 Fiezahana manamarina ara-toetrandro sy ara-toekarena
3.2.2 Fiezahana manamarina ara-kaikintana
3.3 Fankalazana ny taom-baovao fararano
3.3.1 Fomba fankalazana
3.3.2 Faritra sy toerana ary sehatra mankalaza ny taom-baovao malagasy
4 Fankalazana taom-baovao mitety fizaran-taona
4.1.1 Daty tsy amin' ny volana gregôriana raikitra
4.2 Fanamarinana ny fotoam-pankalazana
5 Fankalazana taombaovao lohataona
5.1.1 Fotoam-pankalazana ny taom-baovao lohataona
5.1.2 Daty nankalazana taombaovao lohataona
5.2 Fanamarinana ny fisafidianana ny lohataona
5.2.1 Fanaporofoana ara-tantara
5.3 Fanoherana ny mpankalaza lohataona
5.4 Olana momba ny fampiasana ny anarana hoe Volambita
6 Ny tanjon' ny fankalazana ny taom-baovao malagasy
6.1 Hankalazaina ara-panjakana
6.2 Ho fanavaozana ny hasina
7 Fomba fijery samihafa
7.1 Fomba fijerin' ny Kristiana sasany
7.2 Fomba fijerin' ny Silamo
7.3 Tokony ho daty mitovy no ankalazana ny taom-baova malagasy
8 Jereo koa:
9.1 Rohy momba ny taom-baovao Alahamady fararano
9.2 Rohy momba ny taom-baovao Alahamady mitety fizaran-taona
9.3 Rohy momba ny taom-baovao Volambita lohataona
9.4 Rohy tsy miandany
Samy nanana ny tonontaona heveriny ho lehibe ny isam-paritraHanova
Nivoatra hatrany ny fotoana nankalazana ny tonontaona teto Madagasikara sady samy nanana ny azy ny isam-poko. Tany amboalohany dia azo heverina fa samy nanana ny tonontaonany ny faritra tsirairay noho ny tantarany sy ny fanisan' andro tsy mitovy. Indreto misy ohatra vitsy.
Tao amin' ny AntanosyHanova
I Étienne de Flacourt, tamin' ny taonjato faha-17 tany amin' ny faritra Anosy, dia nanoratra fa mifanandrify amin' ny volana Marsa taona gregoriana ny fiandohan-taonan' ny foko Antanosy izay taranaky ny mpanjaka Raminia tonga teto Madagasikara tamin' ny taonjato faha-12.
Tao amin' ny AntemoroHanova
Ny volana Alahamaly (arabo: االحمل / Al-Hamal) hoan' ny foko Antemoro tarana-dRamakararo, izay lazain' ny lovantsofina fa Arabo tonga teto Madagasikara tamin' ny taonjato faha-16, dia mifanandrify amin' ny volana Avrily amin' ny fanisan-taona gregôriana, tsy volana voalohany amin' ny taona anefa ny Alahamaly amin' ny foko Antemoro.
Tao amin' ny MerinaHanova
Ho an' ny foko Merina dia ny mpanjaka Rabiby, izay lazain' ny lovatsofina fa Arabo koa, no nanova ny anaram-bolana vazimba ho anaram-bolana amin' ny teny arabo ka nahitan' ny Merina ny anaram-bolana Alahamady tamin' ny taonjato faha-16.
Ny tsara ho marihina dia saika taranaky ny mpanjaka Raminia sy ny mpanjaka Ramakararo ary ny mpanjaka Rabiby no nifindrafindra toerana namorona ny fanjakam-poko maro eran' i Madagasikara. Araka ny hevitr' ireo mpankalaza taom-baovao fararano dia tsy mifanalavitra fa miodina eo amin' ny volana Marsa sy Avrily eo ny volana Alahamady hoan' izy telo razamben' ny fanjakana maro teto Madagasikara ireo.
Voalaza fa tany Imerina dia ny mpanjaka Ralambo (1575-1610), zafikelin' ny mpanjaka Rabiby teo Ambohidrabiby, no nanao ny volana Alahamady ho volana voalohany amin' ny taona, noho io volana io nahaterahany. Araka ny fahalalan' ny mpankalaza taom-baovao fararano dia hatramin' ny mpanjaka Ralambo ka hatramin' ny mpanjaka Andrianampoinimerina (1787-1810) dia ny andro voalohany amin' ny volana Alahamady no miandoha ny taona tao Imerina.
Fivavahana sy pôlitika ary toekarenaHanova
Ny fankalazana ny andro heverin' ny Ntaolo malagasy ho mana-danja indrindra ho an' ny mpiara-belona rehetra dia andro lehibe amin' ny lafiny fivavahana na pôlitika na toekarena.
Ny fankalazana manana fototra ara-pivavahanaHanova
Ara-pivavahana tanteraka ilay fankalazana raha mifamatotra amin' ny finoana tsy miankina amin' ny fiovaovan' ny fitondram-panjakana, isan' izany ny fankalazana ny Alahamadibe. Izany anefa tsy misakana ilay fankalazana hahitana fangataham-pitahiana ho an' ny fiadanan' ny vahoaka sy ny fanehoana fanomezan-kasina ny mpanjaka. Tsy voatery ho amin' izany anefa ny fotoana heverina fa fiandohan' ny taona. Ny mpankalaza taom-baovao fararano sasany dia mampitovy ny volana Alahamady amin' ny volana Nisàna hebreo, ka manao izay tsy hifantohana firy amin' ny maha avy amin' ny fivavahan-drazana malagasy ilay fankalazana.
Ny fankalazana miorina amin' ny pôlitikaHanova
Ara-pôlitika kosa izy raha mifamatotra amin' ny fiovaovan' ny zava-misy ara-pôlitika, toy ny fankalazana ny andro nahaterahan' ny mpanjaka (Ralambo sy Andriamasinavalona ary Andrianampoinimerina dia lazaina fa teraka Alahamady, araka ny lovantsofina, na dia lazaina koa fa nasiam-panitsiana hifanaraka amin' ny tetiandro antemoro ny tetiandro merina). Nankalaza ny andro nahaterahany izay nantsoiny hoe Asaramanitra ny mpanjaka merina taty aoriana. Fanehoana fahefan' ny mpanjaka amin' ny vahoakany izany sady fanamafisana ny tokony hankatoavan' ny vahoakany azy. Tsy voatery ho amin' izany koa ny fiandohan' ny taona.
Tamin' ny andron' ny fanjanahan-tany dia ny 14 Jolay no andro nankalazaina indrindra ho fanomezam-boninahitra an' i Frantsa izay nanapaka an' i Madagasikara tamin' izany, tsy nisy idiran' ny resaka fivavahana na toekerena izany. Tamin' ny nahazoan' i Madagasikara fahaleovan-tena dia niova amin' ny 26 Jona izany daty izany.
Ny fankalazana mifandray amin' ny toekarenaHanova
Ara-toekarena kosa ilay fankalazana raha mifandray amin' ny asa fiharian-karena, indrindra ny fambolena sy ny fiompiana; noho izany dia misy ifandraisany kokoa amin' ny tsingerina voajanahary ilay fankalazana. Mety ny andro fiantombohan' ny fotoam-pabolena izany na fotoana famoriana ny vokatry ny fambolena. Tsy voatery hifanadrify amin' ny fiandohan' ny taona ilay fotoam-pankalazana. Tsy mitovy araka izany ny fotoana heverina ho manan-danja isam-paritra noho ny fananan' i Madagasikara veleran-tany midadasika ahitana toetany isan-karazany.
Ireo mpandala ny kolontsaina malagasy dia samy miezaka manamarina ara-pivavahana sy ara-pôlitika ary ara-toekarena ny fisafidianany ny daty iray hataony fankalazana ny taom-baovao malagasy. Miampy fanaporofoana ara-kaikintana koa izany indraindray.
Ny fankalazana amin' ny volana AlahamadyHanova
Ny tonon' andron' ny taom-baovao AlahamadyHanova
Satria miankina amin' ny tetiandro malagasy mampiasa anaram-bolana avy amin' ny teny arabo ny famaritana ny Alahamady, dia tsy fantatra marina ny daty tena mifanandrify amin' io noho ny fisian' io karazana tetiandro io ho roa fara-fahakeliny araka ny ady hevitra ankehitriny.
Taty anivon-tany dia ny mpanjaka Ralambo no lazain' ny lovantsofina fa nankalaza voalohany ny fiandohan' ny taona tamin' ny fomba manetriketrika ary tao amin' ny renivohitry ny fanjakany tao Ambohidrabiby no nanaovana izany voalohany tamin' ny fitsingerenan' ny andro nahaterahany izay lazaina fa tamin' ny taona 1575. Andro vava Alahamady amin' ny volana Alahamady moa io fitsingerin-taona nahaterahany io koa natao hoe "Alahamadibe" (na Alahamady be). Misy ny milaza fa zavatra roa samihafa ny Alahamadibe sy ny taom-baovao malagasy.
Fampifanandrifiana ny Alahamady merina amin' ny Alahamaly antemoroHanova
Araka ny fahalalan' ireo mpankalaza taom-baovao fararano, tamin' ny andron' Andrianampoinimerina dia nampifandrifiana tamin' ny Alahamady antemoro (ataon' ny Antemoro hoe Alahamaly) ny Alahamady tao Imerina araka ny torohevitr' ireo Antemoro mpanolotsaina azy, izany hoe raha mitaha amin' ny fanisan-taona gregôriana dia teo amin' ny volana Marsa ny Alahamady merina no nakisaka ho eo amin' ny volana Avrily.
Mipetraka ihany ny fanontaniana manao hoe: Raha nisy ny fanitsiana dia mbola marina ve ireo daty malagasy tany alohan' ny fanitsiana, indrindraindrindra ireo andro sy volana lazaina fa Alahamadibe tany aloha? Ny mpanjaka Andrianampoinimerina sy ny hafa dia lazaina fa teraka tamin' ny tsinam-bolana Alahamady ary Alahamady no vintany.
Ampahatsiahivin' ireo mpomba ny taom-baovao fararano ny tenin' Andrianampoinimerina hoe: "Tsy manam-pahavalo afa-tsy ny mosary aho" mba hanamarinany ny fisafidianany ny fararano. Izany filazany zany, hoy izy ireo, dia ahitana taratra ny fandresen' ny volana Alahamady izay fotoam-piakaran' ny vary sy fararano amin' ny maintso ahitra. Nanomboka tamin-dRadama I (1810-1828) kosa no nisy ny alimanaka voalohany, izany hoe fanoratana mialoha amin' ny bokikely ny tetiandro hoan' ny taona iray.
Fanitsiana sy fampiasana daty sy anarana hafaHanova
Fanitsiana faha Radama IIHanova
Tamin-dRadama II (1861-1863) dia nasiana fanitsiana indroa ny fanisan' andro malagasy merina satria dia nihoatra 300 andro mahery. Raha izany dia tsy fantatra intsony na nateraka Alahamady marina Andrianampoinimerina sy ny hafa na tsia.
Fisafidianana daty hafa faha-Ranavalona IIIHanova
Tamin-dRanavalona III (1881-1896), vokatr' izany rehetra izany, dia tsy fantatra intsony ny tena andro vava Alahamady amin' ny volana Alahamady satria samy manana ny fanisany andro ny mpanandro. Hany herin-dRanavalona III, novainy amin' ny 22 Novambra andro nahaterahany ny fiandohan-taona, sahala amin' ny nataon' ireo mpanjaka teo aloha izay nanao ny andro nahaterahany ho fiandohan-taona. Saingy ny azy daty gregôriana fa tsy datim-panandroana.
Tamin' ny taonjato faha-19 kosa rehefa nivelatra ny fivavahana kristiana ary lasa Kristiana mihitsy ny fanjakana malagasy dia tsy nampiasaina intsony ilay anarana hoe "Alahamadibe" satria toa misy fombafomba fanao amin' ny sampy izany, koa "Fandroana" no teny nentina niantsoana io fety io. Tamin-dRanavalona III (1883-1896) dia novainy ho ny 22 Novambra, izay tsingerin-taona nahaterahany ny fanaovana ny fandroana, vanimpotoan' ny asara (fizaran-taona mafana sy be orana) moa io 22 Novambra io koa "Asaramanitra" no niantsoana io fety io. Ary "Tratry ny Asaramanitra e!" no teny ifampiarahabana tamin' izany. Marihina fa avy amin' ny teny sanskrity izany anarana izany. Rehefa tonga ny fanjanahantany ka mandrak' ankehitrio dia nampiasaina hilazana izay fety rehetra ny teny hoe asaramanitra na dia tsy vanimpotoan' ny asara intsony aza ka na tonga ny 1 Janoary na 14 Jolay na 26 Jiona dia mifampiarahaba "tratry ny asaramanitra" ny Malagasy.
Tamin' ny andron' ny fanjanahan-tanyHanova
Nony lasa zanatany i Madagasikara dia io fety io (ny Alahamadibe), izay maneho ny fihavanana sy ny firaisan-kinan' ny ambanilanitra, no noravan' ny Vazaha voalohany. Hita taratra tamin' izany tokoa mantsy fa tena fiaraha-monina nirindra ao anatina rafitra milamina sy mafonja no niainan' ny Malagasy, araka ny fomba fijerin' ireo Malagasy nahazo tombontsoa tamin' izany. Ka raha nikendry ny hanjanaka ny Vazaha dia io rafi-piaraha-monina io no noravany voalohany. Avy hatrany dia napetrany fa ny 1 Janoary amin' ny fanisan' andro gregôriana no taom-baovao.
Tamin' ny taona 1897 dia nofoanan' i Frantsa mpanjanatany ny fankalazan' ny Malagasy ny Alahamadibe ary nenjehin' i Frantsa ny Malagasy nankalaza izany. Vokatr' izany, tsy sahy nankalaza izany imasom-bahoaka intsony ny Malagasy. Maro tamin' ireo Malagasy voasokajy ho andevo na mpanompo no tsy nahatsiaro fahavoazana loatra tamin' ny nanafoanana izany.
Ny olana momba ny famaritana ny volana Alahamady ankehitrinyHanova
Fara-fahavitsiny dia misy "tsinana Alahamady" roa karazana ny eto Madagasikara noho ny fisian' ny karazana tetiandro roa samy mampiasa anaram-bolana amin' ny teny arabo.
Volana Alahamady amin' ny farararoHanova
Amin' ireo mpanaraka ny tetiandro malagasy manara-bolana sy masoandro dia amin' ny Marsa na Avrily no anombohan' ny volana Alahamady, izany hoe amin' ny fizaran-taona fararano.
Volana Alahamady miovaova fizaràn-taonaHanova
Amin' ireo mpanaraka ny tetiandro malagasy manara-bolana tanteraka dia miovaova fizaràn-taona ny volana Alahamady, ka ny mifanandrify aminy dia ny volana silamo atao hoe Saoaly (arabo: شوّال) / Shawwal) no mifanandrify aminy, izany hoe aorian' ny volana Ramadany (arabo: رمضان / Ramadan).
Ny taom-baovao fararanoHanova
Araka ny fahalalan' ireo ao amin' ny Trano Koltoraly Malagasy (TKM), izay mbola tokony mila fanamarinana ara-tantara, tamin' ny taonjato faha-19, rehefa lasa Fanjakan' i Madagasikara ny Fanjakan' Imerina dia efa nankalaza tamin' ny daty iray niraisana ny 3/4n' ny faritra rehetra eto Madagasikara, ka efa fetim-pirenena niraisan' ny Malagasy maro anisa ny fankalazana ny tonontaona talohan' ny nahalasa zanatany an' i Madagasikara tamin' ny taona 1896 ary efa samy nankalaza azy, hoy izy ireo, ny eran' ny Nosy talohan' ny taona 1896.
Io isa 3/4 io dia ny ampahan-tanin' i Madagasikara lazain' ny mpahay fa nofehezin' ny mpanjaka merina. Isan' ny antony tokony hankalazan' ny Malagasy rehetra ny taom-baobao fararano izany, araka ny hevitr' izy ireo.
Ny datin' ny fankalazanaHanova
Daty amin' ny volana Marsa sy AvrilyHanova
Ny Trano Koltoraly Malagasy sy ny mpikambana sasany ao amin' ny Akademia Malagasy no voalaza fa namaritra io daty io araka ny fikarohana nataon' izy ireo.
Tamin' ny taona 2004 dia ny 21 Marsa no nakalazana ny taom-baovao malagasy.
Tamin' ny taona 2011 dia ny 3 Avrily no nanatanterahana izany.
Ny datin' ny taom-baovao tamin' ny taona 2013 dia na 12 Marsa (ho an' ny Trano Koltoraly Malagasy) na 16 Marsa 2013 (ho an' ny Mamelomaso).
Tamin' ny taona 2014 dia tamin' ny 31 Marsa.
Nankalazaina tamin' ny 20 sy 21 Marsa izany tamin' ny taona 2015. Tamin' ny taona 2015 dia ny 20 Marsa alina no tsinana ny volana Alahamady, ary ny 21 Marsa 2015 no miandoha ny taona malagasy 2015. Ny 20 sy 21 Marsa 2015 araka izany no nankalazany amin' ny fomba manetriketrika ny taom-baovao malagasy 2015.
Ny 10 Marsa no nanaovana ny fankalazana tamin' ny taona 2016 .
Nankalazaina tamin' ny 28 Marsa ny taom-baovao malagasy 2017.
Tamin' ny taona 2018 dia tamin' ny 18 Marsa no nankalazana ny taom-baovao fararano .
Tamin' ny taona 2019 dia ny 6 Avrily no nankalazana ny taom-baovao malagasin' ireo ao amin' ny Trano Koltoraly Malagasy.
Ny tetiandro ampiasain' ny mpankalaza taom-baovao fararanoHanova
Ny tetiandro ampiasain' ireo mpankalaza taom-baovao fararano dia tokony tsy manara-bolana tanteraka fa manara-bolana sy masoandro. Midika izany fa amin' izy ireo dia nanana fomba namantarany ny ekinoksam-pararano (21 Marsa), na zavatra hafa mitovy amin' izany, ny Ntaolo, na dia tsy fiteny tamin' izany fotoana izany aza ny hoe ekinoksa (frantsay: equinoxe). Lazaina fa ny Trano Koltoraly Malagasy sy ny mpikambana sasany ao amin' ny Akademia Malagasy dia samy nikaroka momba izany ary nitovy ny fomba fijerin' izy ireo fa raha ampifandrifiana amin' ny fanisan-taona gregôriana dia ny tsinambolana akaiky indrindra ny ekinoksa 21 Martsa no fiandohan' ny taona malagasy ka ankalazana ny taom-baovao malagasy.
Toherin' ny mpanaraka ny tetiandro manara-bolana sady mankalaza Alahamadibe, tsy amin' ny daty na volana gregôriana raikitra, ny fomba famaritan' ireo mpankalaza taom-baovao fararano satria amin' izy ireo dia manara-bolana tanteraka ny tetiandro malagasy.
Tsy mijery volana na kintana intsony fa mampiasa solosainaHanova
Fahizay, hoy izy ireo, dia manisa andro sy mijery ny endrika sy ny toeran' ny volana mitaha amin'ny antokon-kintana ny mpanandro mba hahalalana ny volana tsinana sy ny diavolana sy ny maizimbolana ary ny anaram-bolana. Ankehitrio kosa, noho ny fisian' ny milina matanjaka dia azo fantarina mialoha ny andro mahatsinana ny volana Alahamady, araka ny eritreritr' ireo mpankalaza taom-baovao fararano, satria ireo solosaina matanjaka dia afaka mikajy izany ho an' ny 50 taona hoavy.
Indreto santionany amin' ny datin' ny taom-baovao malagasy fararano hatramin' ny taona 2019:
Taona 2015: 20 Marsa 2015 amin' ny 12 ora 36mn antoandro no tsinan' Alahamady.
Taona 2016: 10 Marsa 2016 amin' ny 04 ora maraina sy 55 mn no tsinan' Alahamady.
Taona 2017: 28 Marsa 05 ora maraina sy 58 mn no tsinan' Alahamady.
Taona 2018: 17 Marsa amin' ny 16 ora hariva sy 13 mn no tsinan' Alahamady.
Taona 2019: 05 Avrily amin' ny 11ora atoandro 51 mn no tsinan' Alahamady.
Fiverenana amin' ny volana Marsa sy AvrilyHanova
Araka ny fahalalan' ireo mpitarika ny fankalazana taom-baovao fararano, tamin' ny taratasim-panjakana nifanaovan' ny mpitondra fanjakana teto Madagasikara tamin' ny nanjakan-dRanavalona III, taratasy izay voarakitra ao amin' ny tahirim-bakokam-pirenena, dia hita fa mifanandrify amin' ny volana Marsa na Avrily eo hatrany ny volana Alahamady hoan' ny taona 1894 sy 1895 sy 1896 ary 1897.
Fanamarinana ny taombaovao fararanoHanova
Fiezahana manamarina ara-toetrandro sy ara-toekarenaHanova
Hoan' ny Trano Koltoraly Malagasy dia eo amin' ny vanimpotoan' ny faranano, izany hoe, hoy izy ireo, efa lasa ny rivodoza, ny ranobe, ny fihotsahan' ny tany, izany fotoana izany. Miakatra ny vary, ka resy ny maintso ahitra. Fahizay dia indroa miakatra ny vary isan-taona ka ny "vary aloha" dia eo amin' ny Febroary no miakatra, fa ny fotoana fiakaran' ny vary hafa kosa dia eo amin'ny fararano izay mifanandrify amin' ny volana Marsa-Avrily amin' ny taona gregôriana. Efa afaka mifaly sy tsy mifehy kibo intsony ny rehetra ary efa nindaosin' ny ranobe sy ny rivodoza ny loto ary manomboka madio indray ny voajanahary rehetra.
Ny Malagasy dia manararaotra an' io hidio amin' ny alalan' ny fandroana sy fifamelana ary fandiovana ny tontolo manodidina. Fotoana filanonana ara-boajanahary, hoy izy ireo, ny fararano, satria tafavoaka ny andro ratsy sy ny mosary.
Entin' izy ireo manamarina ny fankalazana koa ny fiteny fahizay, toy ny hoe "Mandihiza rahitsikitsika, hianaranay raha fararano".
Fiezahana manamarina ara-kaikintanaHanova
Misy amin' ny mpankalaza taom-baovao fararano ny milaza fa amin' ny vava Alahamady no mifanitsy ny tsinam-bolana sy ny antokon-kitanan' Alahamady eny amin' ny lanitra raha jerena avy eto Madagasikara. Misy aza ny milaza fa mifanitsy amin' ireo koa ny masoandro. Ny tsinam-bolana akaiky indrindra ny ekinoksa 21 Martsa no tena mora amantarana ny andro voalohany amin' ny taom-baovao malagasy, hoy ireo mpanao ny fankalazana amin' ny fararano.
Izany fiheverana izany dia tsy mifanaraka amin' ny zava-misy marina ara-kaikintana satria tsy amin' io fotoana io no idiran' ny masoandro na ao amin' ny fari-danitry ny antokon-kintan' ny Alahamady (latina: Aries; frantsay: Belier). Ny daty maha ao amin' ny fari-danitry ny antokon-kintana Alahamady dia eo anelanelan'ny 18 Avrily sy 13 Mey.
Fankalazana ny taom-baovao fararanoHanova
Araka ny hevitr' ireo mafana fo amin' ny fankalazana, ny taom-baovao malagasy dia tsy misy fomba iraisana hankalazana azy fa dia miankina tanteraka amin'ny mpikarakara ny fankalazana azy: ny Kristiana dia afaka mankalaza izany amin' ny fomba kristiana, ny Silamo malagasy koa dia afaka mankalaza ny taom-baovao malagasy amin' ny fomba silamo; toy izany koa ireo mpandala ny nentim-paharazana. Ny mpandraharaha amin' ny sehatra maro dia afaka mankalaza izany koa amin' ny fombany toy ny hetsika ao amin' ny toeram-piasana na toeram-pianarana. Ny taranak' andriana dia afaka mankalaza izany amin' ny fombany. Ary any amin' ny faritra maro eran' i Madagasikara dia azo ankalazaina amin' ny fomba any amin' ny faritra ny taom-baovao malagasy.
Izany filazana fahalalahana izany dia misy fetrany ihany raha jerena ny fihetseham-pon' ny mpankalaza taom-baovao fararano manoloana ireo Malagasy hafa mankalaza taom-baovao lohataona araka ny hita amin' ny tambazotran-tserasera sy tranonkala ampiasainy.
Mba hahatonga ny fankalazana ny taom-baovao fararano hahazo olona maro dia milaza ireo mpomba azy fa malalaka ny fomba fanatanterahana izany araka ny toerana misy ny mpikarakara satria ny rehetra dia afaka mankalaza azy amin' ny fomba mety aminy. Rehefa tonga ny taom-baovao malagasy dia azo atao tsara ny mankalaza izany amin' ny fomba misy ao amin' ny faritra mankalaza izany.
Na dia izany aza dia tsy vitsy amin' ireo Malagasy ny tsy mamerina ny fomba fankalazana Alahamadibe izay heveriny fa mifanohitra amin' ny toetrandro. Tsy misy araka izany ny lapabe sy ny kimandrimandry izay lazain' ny mpahay tantara fa nisehoana fahalalahan' ny firaisana ara-nofo. Misy, ohatra, omby tsy tokony ho vonoina noho ny volony.
Faritra sy toerana ary sehatra mankalaza ny taom-baovao malagasyHanova
Mankalaza ny taom-baovao malagasy fararano ny eto Antananarivo sy eny Ikianja Ambohimangakely, ny ao Imerimanjaka, ny ao Ambohidrabiby, ny ao Ambohimanga, ny ao Sabotsy Namehana ary ny ao Ilafy.
Nisy sekoly ao Antananarivo izay mankalaza io taom-baovao io ao amin'ny toeran'ny sekoly ihany na mamonjy ireny toerana manan-tantara ireny. Ny sekoly ACEEM dia nankalaza ny taom-baovao fararano tao an-tsekoly ka ny mpianatra amin' ny sekoly dia manao fitafy malagasy amin' ny andron' ny fankalazana.
Misy koa ny Kristiana sy nankalaza ny taom-baovao malagasy fararano. Ny Fiangonana FJKM Ambohidrabiby dia mankalaza izany amin' ny fomba kristiana ka fivavahana ekiomenika ao ampiangonana no ataony amin' izany ary ny mpiangona dia manao akanjo malagasy daholo amin' izany.
Ao koa ny fikambanana pôlitika nankalaza azy toy ny antoko KITANA tarihin' i Tabera izay tsy nankalaza izany intsony taty aoriana. Maro koa ireo trano fisakafoanana sy filanonana manao tolotra manokana rehefa tonga ny taom-baovao malagasy fararano.
Marihina fa tsy rototra amin' ny fankalazana io atao hoe taom-baovao malagasy fararano io ny any amin' ny faritra maro ivelan' Analamanga nefa misy ihany ny tonga ao Antananarivo rehefa mahazo fanasana, indrindra ireo ampanjaka sy tangalamena sns.
Fankalazana taom-baovao mitety fizaran-taonaHanova
Ity indray dia taom-baovao amin' ny tsinan' Alahamady araka ny tetiandro malagasy manara-bolana tanteraka. Tsy amin' ny daty gregôriana na fizaran-taona raikitra ny tsinan' Alahamady fa mitety ny volana gregôriana sy ny fizaran-taona rehetra.
Daty tsy amin' ny volana gregôriana raikitraHanova
Manampy ireo daty roa efa voalaza (Marsa-Avrily sy Septambra) ny daty araka ny tsinan' Alahamady amin' ny tetiandro malagasy manara-bolana tanteraka ka mahatonga fisiana datin' ny taom-baovao malagasy ho telo ao anatin' ny taona. Ny tetiandro malagasy misy anaram-bolana avy amin'ny teny arabo dia miankina tanteraka amin' ny tsingerim-bolana fa tsy amin' ny masoandro ka latsaka 10 na 11 andro ny taona manara-bolana ary tsy mifanena ny daty gregôriana sy ny daty manara-bolana raha tsy afaka 33 taona gregoriana fa tsy isan-taona . Ilay mpanoratra ny "Alimanaka malagasy", i Alima Rabesata, koa dia manohana io Alahamady mitety fizan-taona io sady manohitra mafy ny Alahamady fararano tsy miova.
Nisy fankalazana taom-baovao tamin' ny 29 Aogositra 2011. Tamin' ny taona 2012 dia ny 19 Aogositra no nanatanterahana izany. Ny datin' ny taom-baovao tamin' ny taona 2013 dia tamin' ny 8 Aogositra 2013. Ny taom-baovao malagasy araka ny tetiandro manara-bolana tamin' ny taona 2017 dia ny tsinam-bolan' Alahamady tamin' ny 24 Jona.
Fanamarinana ny fotoam-pankalazanaHanova
Ireto misy sombin-dahatsoratra faha mpanjaka izay mety manamarina ny tsy maha raikitra amin'ny volana gregoriana iray na roa ny volana malagasy iray, indrindra ny mahadiso ny taom-baovao fararano.
"Izaho Ranavalomanjaka, .... Manome ity taratasy ity an-dRahobivelo ho fahatsiarovana ny soa nataony tamy ny Fanjakana noho ny nandoavany Ariary roa ho fitia tsy mba hetra tamy ny nandoavany vidim-basy tamy ny 10 Asombola 19 Febroary 1880... Nosoratana tao amy ny Lapako ao Tsarahafatra tamy ny 20 Alahasaty (30 Janoary), ny taonan'ny Tompo, 1880"
Fankalazana taombaovao lohataonaHanova
Fotoam-pankalazana ny taom-baovao lohataonaHanova
Nanomboka tamin' ny taona 2016 dia nisy ny fankalazana taom-baovao malagasy iraisam-paritra izay atao amin' ny volana Septambra ka tapaka fa amin' ny tsinam-bolan' ny Septambra no anatanterahana izany. Talohan' io taona 2016 io dia efa nisy ny nanao fankalazana ny taombaovao lohataona tao Antananarivo. Taty aoriana dia nanapaka ireo mpankalaza taom-baovao lohataona tamin' ny taona 2018 fa ankalazaina isaky ny 22 Septambra ny taom-baovao malagasy ho an' ny faritra rehetra eto Madagasikara. Izany hoe tsy ankinina amin' ny tsinam-bolana fa ankinina amin' ny fizaran-taona. Marihina fa io volana Septambra io dia iray amin' ireo volana ao amin' ny fizaran-taona atao hoe lohataona izay mifanandrify amin' ny volana Volambita avy amin' ny teny sanskrity. Natao hoe Volambita rahateo ity vaninandro ity.
Daty nankalazana taombaovao lohataonaHanova
Efa hita tany amin' ny taona 2012 tany ny firesahana ny hoe Volambita izay nanaovana hetsika ara-kolontsaina indridra amin' ny lafiny zavakanto. Nankalazaina tamin' ny 21 Septambra ny taom-baovao malagasy 2017    . Tamin' ny taona 2018 dia tamin' ny 22 Septambra kosa ny taom-baovao lohataona.
Fanamarinana ny fisafidianana ny lohataonaHanova
Ny fiantombohan' ny lohataona, hoy ny mpankalaza taom-baova lohataona, no atao hoe Volambita any amin' ny faritra maro eto Madagasikara izay nampiasa ny anaram-bolana amin' ny teny sanskrity. Raha faritra vitsy no lazaina fa nankalaza ny Alahamadibe, izay mifamatotra amin' ny andro nahaterahan' ny mpanjaka Ralambo sy ny mpanjaka merina hafa koa, ny fiantombohan' ny lohataona dia fantatry ny ankamaroan'ny foko rehetra eto Madagasikara efa talohan' ny fiitaran' ny fanjakana merina sady nankalazainy tsy an-tery fa an-kalalahana. Tsy vao tamin' io taona 2018 io tsy akory, hoy izy ireo, no nanombohan' ny Malagasy nankalaza ny taom-baovao lohataona.
Ny olana eto dia ny tsy fitovizan' ny fotona tondroina amin' ny anarana hoe Volambita tamin' ny faritra maro, satria ny volana rehetra ao amin' ny lohataona dia nety natao Volambita tamin' ny fotoana faha mpanjaka, araka ny voasoratry ny mpahay tantara. Tsy mitovy habe amin' ny olana misy eo amin' ireo mpankalaza Alahamadibe na taom-baovao fararano anefa izany satria samy ao anaty lohataona ny Volambita samihafa fa tsy tamin' ny fizaran-taona samy hafa. Ny anaram-bolana sasany avy amin' ny fiteny sanskrity rahateo dia anarana ahafantarana ny fizaran-taona koa.
Fanamarinana ara-pitenenana sy ara-boajanahary
Milaza ny mpankalaza taom-baovao lohataona fa ny fiandohan' ny lohataona no tena taom-baovao malagasy satria miandoha na manomboka eo ny taona. Amin' ny maha fotoana fiandohan' ny taona azy indrindra, hoy izy ireo, no nanomezan' ny Ntaolo malagasy azy ny anarana hoe lohataona (misy koa ny manao hoe lohatao na lohataogno). Mbola hita taratra ao amin' ny anaran' ilay vorona atao hoe taotaonkafa, kankafotra na taotaokafo (anarana ara-tsiansa: Cuculus poliocephalus rochii), izay ataon' ny Ntaolo malagasy fa manambara ny fahatongavan' ny taona hafa (na dia toy izany ihany ny fanenony amin' ny fizaràn-taona hafa rehetra), izany hoe taona vaovao izany rehefa maneno amin' ny fiandohan' ny lohataona. Hita amin' ny angano izany ary hita koa amin' ny ohabolana sy ny fitenenana maro  ary ny tonon-kalo na hainteny tranainy na vaovao.
Amin' io fotoana io, hoy ny mpomba ny taom-baovao lohataona, dia manomboka velom-bolo ny zavaboary manontolo, fa tsy ny olombelona ihany, manomboka mitsiry ny ravin' ireo zavamaniry manintsan-dravina, mihamaro ny vorona misiotsioka, manomboka ny fiasan-tany sns, mivoaka avy any anaty tany ireo biby mpilevina ririnina. Tsy ny malagasy ihany no nankalaza ny lohataona fa firenena maro koa, ka ny volana Marsa, raha ny marina, dia fiandohan' ny lohataona any amin' ny ila-bolantany avaratra, fa ny aty atsimo kosa amin' ny volana Septambra.
Izao ny tenin' ny filohan' ny fikambanana Iray Madagasikara, Eris Rabedaoro:
"Nahoana no nantsoina hoe Volambita ary nahoana no ankalazaina amin’ny volana septambra ? Rehefa tonga ny volana septambra aty amin’ny ilabolan-tany atsimo, dia mifoha daholo indray ny zava-manan’aina. Velona avokoa noho izany na ny vorona, na ny voninkazo, na ny hazo, na ny biby. Hoy ny volan’ny kakafotra hoe: Tao Tao Kafa, izay midika hoe Taona Vaovao. Ny ambiaty kosa dia mamelana amin’io fotoana io. Hoy ny Ntaolo hoe: manambara izany fa tonga ny taona vaovao voalazan’ny Lanitra. Namorona io zavamaniry io hono mantsy Andriamanitra entina hanambarana ny Lohataona. Ny ambiaty mantsy mahalala ny ao ampon’ny Lanitra. Samy nanome anarana io Lohataona io avokoa ny foko rehetra, ka nisy anarana iray niavaka tamin’ny be sy ny maro, dia ny Volambita. Mitovy amin’ilay antsoina hoe Asaramanitra any ampovoan-tany sy any antsimon’ny nosy izy io. Mety avy amin’ny sansrit no nihavian’ny teny hoe Volambita saingy tsy fantatra mazava izay tena dikany, ka izay ihany koa no antony nisafidianana azy. Amin’io fotoana io isika mianakavy vao hiara-hankalaza andro lehibe iombonana hatramin’ny nahazoantsika ny fahaleovantena na dia samy manana ny fankalazana ny taom-baovaony aza ny faritra sy foko tsirairay avy. Amin’ny alalan’ny harentsaina sy ny zava-kanto no iarahantsika manatontosa izany firaisan-kina izany. Raha mifandray tanana isika, dia hiara-hiaro ny firaisan-kina sy ny fihavanana ary hiaro ny fahasamihafana. Fa ny fihavanana no hery".
Fanoherana ny mpankalaza lohataonaHanova
Toherin' ireo mpankalaza taom-baovao fararano ny fankalazana ny Volambita. Antony roa lehibe no tena misongadina, dia antony ara-pôlitika sy antony ara-pinoana. Ao ny fiampangana ny mpankalaza taom-baovao Volambita ho mpivarotra tanindrazana sy mpanongam-panjakana. Nampangaina ho olona tsy manaja ny hasina izy ireo tamin' ny famonoana omby mainty sy tamin' ny nisafidian' izy ireo andro heverin' ny mpankalaza taom-baovao fararano ho mifanohitra amin' ny Alahamady. Lazain' ny mpomba ny Alahamady fararano fa fotoana mampihetsika ny hadalan' ny biby sy ny olombelona ny volana Septambra.
Olana momba ny fampiasana ny anarana hoe VolambitaHanova
Tsy tokana ny laharan' ny Volambita fa miovaova isam-paritra. Misy ny milaza fa volana voalohany ao amin' ny taona izy satria mifanandrify amin' ny lohataona. Tsy manondro fari-potoana tokana ny anarana hoe Volambita sady tsy volana voalohany ao amin' ny taona ny Volambita amin' ny faritra rehetra eto Madagasikara. Ao amin' ny foko tambahoaka sy bezanozano dia anaran' ny volana faha-11 ny Volambita, ny Sihanaka sy ny Antanosy kosa dia manao ny Volambita ho volana faha-8. Volana manan-danja indrindra ny Volambita (misabaka amin' ny volana Septambra sy Oktobra) any amin' ny faritra atsimo-atsinanan' i Madagasikara. Volana voalohany ny Volambita ao amin' ny foko betsimisaraka, izay manitsaka ny volana Septambra sy Oktobra, ka eo no anombohan' ny fotoam-pambolena. Amin' ny Antefasy dia volana fahafolo ny Volambitabe (Rakotosaona, 1972).
Ny tanjon' ny fankalazana ny taom-baovao malagasyHanova
Ny firenena malagasy, toy ny firenena maro eran-tany (Jiosy, Silamo, Egiptiana, Etiôpiana, Indiana, Sinoa, Eorôpeana) dia nanana ny taonany manokana sy mankalaza ny fiandohan'izany taona izany. Tsy latsa-danja noho ireo ny Malagasy.
Hamerenana izay nofoanan' ny fomba vahiny
Nosoloin' i Frantsa ny fankalazana ny 14 Jolay ny fankalazana ny taom-baovao malagasy. Amin' izao fotoana izao koa dia misy ny Malagasy mihevitra fa ampy hanamarihana ny firaisam-pirenena ny fankalaza ny fetin' ny fahaleovan-tena malagasy isaky ny 26 Jona. Araka ny hevitr' ireo ao amin' ny Trano Koltoraly Malagasy, hatramin' ny taona 1897 mandrak' ankehitrio dia mbola "manan-kery" foana ny didim-pitondrana noraisin' ny mpitondra frantsay nanafoana ny fankalazana ny taom-baovao malagasy. Ny mpitondra nifandimby dia tsy rototra tamin' ny fanafoanana izany lalàna izany, tsy noho ny fanoherany ny fankalazana, satria misy ny mankalaza izany malalaka, fa noho ny mety ho fandraisan' ny Malagasy ny hevitra ara-pôlitikan' izany raha ampifandraisina amin' ny tantara faha mpanjaka.
Nanomboka tamin' ny taona 2007 dia nijoro ny Trano Koltoraly Malagasy sy ny Akademia Malagasy izay niara-namerina ny fankalazana amin' ny fomba manetriketrika izany taom-baovao malagasy izany ka nisafidy ny volana Marsa na Avrily izay heveriny fa mifanandrify amin' ny Alahamady.
Na dia mankalaza malalaka izay heveriny ho taom-baovao malagasy aza ny ao amin' ny Trano Koltoraly Malagasy sy ny sokajin' olona hafa koa dia tsy afa-po izy ireo raha tsy foanana ilay didim-pitondrana noraisin' ny fanjakana frantsay. Tsy vitan' izay fotsiny fa entaniny ny fanjakana malagasy hanao andro tsy fiasana nefa andraisa-karama izany andro fankalazana ny taom-baovao malagasy izany.
Tsy afa-po koa ny Trano Koltoraly Malagasy satria tsapany fa mihamaro ny mpitondra fanjakana no mankalaza ny taom-baovao malagasy saingy mbola tsy ofisialy izany. Nisy ny vahiny, toy ny Ambasadôro indôneziana eto Madagasikara, izay tonga nanotrona tamin' ny fomba ofisialy ny fankalazana ny taom-baovao malagasy tamin' ny 31 Martsa 2014.
Araka ny hevitr' ireo ao amin' ny Trano Koltoraly Malagasy, rehefa tafaverina amin' ny fomba ôfisialy ny fankalazana izany taom-baovao malagasy izany dia ho avy hiarahaba ny firenena sy vahoaka malagasy ny firenena maro eran-tany isaky ny Marsa na Avrily isan-taona, izay vao hohajain' ny vahiny amin' ny fombany ny Malagasy ary hotafa-toetra ny fiandrianam-pirenena tena izy.
Ho fanavaozana ny hasinaHanova
Araka ny fahalalan' ny mpankalaza taom-baovao fararano, ny taom-baovao malagasy, tamin' ny niantsoana azy hoe Alahamadibe, dia nataon' ny Ntaolo ho fanavaozana ny hasina eo amin' ny tontolo rehetra, ho fanamafisana orina ny fihavanana sy ho fametrahana sy fisaorana an' i Zanahary noho ny soa sy fitahiana rehetra nataony ary ny amin' ny hoavy mandritry ny taona vaovao ary ho fanomezan-danja ny maha Malagasy.
Fomba fijery samihafaHanova
Ireo sokajin' olona ampangain' ny sasany fa te hampifanakaiky ny fomba malagasy amin' ny fomba jiosy na hebreo (jereo: Jiosy malagasy) dia milaza fa amin' ny volana Marsa na Avrily, amin' ny volana Abiba na Aviva na Nisana amin' ny tetiandro hebreo ny taom-baovao malagasy.
Fomba fijerin' ny Kristiana sasanyHanova
Nihanahazo laka avy hatrany ihany koa ny fivavahana kristiana teto Madagasikara ka izay manohy mankalaza ny Alahamadibe dia nolazaina avy hatrany fa manompo sampy.
Ny tsara homarihina tokoa mantsy dia misy fifamatorana akaiky tsy azo sarahina ny fitondram-panjakana, ny fanisana andro sy ny fomba (ara-piarahamonina sy ara-pivavahana) ho an' ny mponina na ny firenena iray. Ohatra, ny Silamo manana ny fanisana andro ho azy ireo sy ny fety ara-pivavahava miaraka aminy; toraka izany koa ny Sinoa, ny Karàna ary ny Eorôpeana izay tompon' ny fanisana andro gregôriana sy nampiely ny fivavahana kristiana, raha tsy hitanisa afa-tsy ireo isika. Ny fandraisana ny fivavahana kristiana koa dia nahatonga ny maro amin' ny Malagasy hihevitra fa mpamosavy sy mpilalao ody izay Malagasy mbola manao izany fankalazana ny taom-baovao malagasy izany.
Inoan' ny Kristiana (sady efa nahafaty maritiry ny sasany aminy izany) fa efa voadio tamin' ny ran' i Jesoa Kristy izy sady mihevitra ny Kristiana (ny Katôlika sy Ôrtôdôksa sy ny Anglikana sy ny ankabeazan' ny Prôtestanta) tsy te hampifangaro finoana (sinkretista) fa ny Advento na Fiandrasana no taom-baovao raha eo amin' ny lafiny finoana. Mifanembantsembana amin' ny fotoam-piomanana amin' ny Paska (na Paka) izay ankalazan' ny Kristiana ny fahavitan' ny famonjena azy ny datin' ny taom-baovao fararano. Ankoatra izany dia niharoharo fomba mifanohitra amin' ny fitondran-tena kristiana madio koa ny fankalazana ny Alahamadibe faha mpanjaka novana anarana ho "taom-baovao malagasy" ka isan' izany ny fanaovana kimandrimandry sy lapabe. Manampy trotraka amin' ny tsy faharisihan' ny Kristiana maro ny fahitana na fandrenesana ny Malagasy mpandala ny nentin-drazana sasany izay tena mankeny am-pasana (indrindra ny fasan' ny mpanjaka Ralambo) manao fombafomba hangataham-pitahiana.
Fomba fijerin' ny SilamoHanova
Tsy ny Kristiana tsy te hampiharoharo finoana ihany, fa misy amin' ny mpino silamo eto Madagasikara koa ny tsy resy lahatra amin' ny fankalazana taom-baovao ankoatry ny iraisan' ny ankamaroan' ny olombelona maneran-tany sy ny taom-baovao silamo izay ankalazainy amin' ny volana Moharamo.
Tokony ho daty mitovy no ankalazana ny taom-baova malagasyHanova
Na dia eo aza ny fahalalahan' ny Malagasy tsirairay sy isam-paritra hankalaza izay fety tiany hankalazaina amin' ny fotoana heveriny fa mifanaraka amin' ny fomban-drazany, dia mihevitra ny Malagasy mpandala ny kolontsaina malagasy, indrindra fa ny ao amin'ny Trano Koltoraly Malagasy, fa tsy azo heverina intsony ny samy hankalaza ny taom-baovao malagasy araka ny datin' ny faritra tsirairay. Izany dia mitaky daty iray iombonan' ny faritra rehetra. Averina ankalazaina amin' ny fomba manetriketrika izany tonontaona malagasy izany satria natao hoan' ny Malagasy tsy vakivolo, tsy manavaka fiaviana, firazanana sy finoana ary foko izany. Ny taom-baovao malagasy, amin' ny maha fankalazana natao ho an' ny Malagasy tsy ankanavaka azy, dia tokony hatao eran' i Madagasikara sy maneran-tany ka ny Malagasy no entanina hankalaza izany isan-taona.
Rohy momba ny taom-baovao Alahamady fararanoHanova
"Taombaovao malagasy: daty ? fomba ? tanjona ?" - Fanambinanamadagasikara.blogspot
"Hankalazaina ny 17 Martsa izao ny Taombaovao Malagasy 2018" - Book News Madagascar
"Ny taom-baovao ara-Baiboly na Taombaovao malagasy dia manomboka ny volana Abib (Marsa-Avrily)" - Ny Jiosy eto Madagasikara
Rohy momba ny taom-baovao Alahamady mitety fizaran-taonaHanova
"Fikambanana Zanadranavalona Hanatanteraka indray ny Taom-baovao eto Imerina" - Tia Tanindrazana
Rohy momba ny taom-baovao Volambita lohataonaHanova
Volambita: la fête du fihavanana, Midi-Madagascar, 30 Aogositra 2017.
"Volambita": un "Asaramanitra" très eclectique !, Midi-Madagascar, 25 Septembre 2017.
Tradition – « Volambita » célèbre le Nouvel An malgache, agir.avec.madagascar.over-blog.com
Volambita: hasongadina ny soatoavina malagasy, News Mada, 20/09/2017
Rohy tsy miandanyHanova
"Oviana marina ny fankalazana ny taom-baovao Malagasy 2018?" - Blaogin'i Voniary
"Aiza ho aiza marina ilay Taombaovao Malagasy?" - Hevitra Mpanohariana
"Le Calendrier malgache" - iCalendrier. fr
Loharano sy fanamarihanaHanova
↑ "Us et coutumes : Le Nouvel An malgache est différent de l’« Alahamady be »" - par Alain Gyre - in Agir avec Madagascar 19 mars 2013.
↑ 2,0 2,1 2,2 et 2,3 "Sur le nouvel an malgache" - Jean-Pierre Domenichini - Historien - Membre de l’Académie Malgache - Grand-Officier de l’Ordre National - CRESOI
↑ "Nouvel an malgache : quelle date exactement ?" - Andrianetrazafy Hemerson in Madaplus.info
↑ "Nouvel an malgache : Tout ce qu'il y a à savoir - Agir avec Madagascar" - 27 Mars 2014 par Alain Gyre in Agir avec Madagascar.
↑ "Bonne année (nouvel an malgache) quand même!", Lay Corbeille, 20 mars 2015
↑ "Tokantrano, tsy ahahaka", in FAnambinana MAdagasikara - FAMà, 02 mars 2015.
↑ "Les 6 choses que vous devez savoir sur le nouvel an malgache" in Blogdemadagascar
↑ "Ny Taombaovao Malagasy ou le Nouvel An Malagasy." nosoratan'i Jao Malaza in Lemurie.over-blog.com
↑ "Arts & Culture : Taom-baovao malagasy 2017 à Analakely" in TVMada-RadioMada
↑ "Tradition - Le Nouvel An malgache dans une liesse populaire", L'Express de Madagascar, 19 Marsa 2018
↑ "Nouvel An Malagasy 2018 : soyons fiers de notre culture ! " - Mada Actus Info.
↑ Tokony tsy ho marina izany raha heverina ny momba ny fikisahan'ny zodiaka mikisaka.
↑ Cousins, Ny fomba malagasy, 7e edition, Imprimerie Imarivolanitra, 1963, p. 169.
↑ P. Adolphe Razafintsalama, Ny finoana sy ny fomba malagasy, edisiona Md Paoly, Antananarivo, 1989, p. 52.
↑ Sombin-dahatsoratra aseho ao amin'ny rakibolana Vitasoa, nosoratan-dRabenilaina Roger Bruno sy ny namany, p. 484, taona 2015, Edisiona Ambozontany, Analamahitsy, Antananarivo, 2015.
↑ "Taom-baovao iraisan’ny Malagasy rehetra Nankalazaina teny Ambohimanga, omaly" - Tia Tanindrazana Archived Oktobra 21, 2019 at the Wayback Machine
↑ "«Volambita» : Hisantarana ny antsa asabotsy sy ny efitra malalaka", http://www.scoop-digital.com, 20 0ctobre 2012.
↑ "Volambita: Hasongadina ny soatoavina malagasy", in News Mada.com, 20 Septembre 2017.
↑ "Taom-baovao iraisan'ny Malagasy rehetra Nankalazaina teny Ambohimanga, omaly" Archived Oktobra 21, 2019 at the Wayback Machine - in Tia Tanindrazana
↑ "«Volambita» : Un «Asaramanitra» très éclectique !", in Midi Madagascar, 25 Septembre 2017.
↑ "Volambita : La fête du « Fihavanana »", in MidiMadagascar, 31 Aout 2017.
↑ Constant HAMES (coll.), Coran et talismans - Textes et pratiques magiques en milieu musulman, 2007, p. 240.
↑ "Kankafotra" ao amin'ny Dictionnaire malgache et encyclopédie de Madagascar.
↑ "Le kankafotra et la vintrsy" ao amin'ny Agir avec Madagascar
↑ "Proverbe: Kankafotra" ao amin'ny Dictionnaire malgache et encyclopédie
↑ "Ohabolana misy teny hoe ka,kafotra", in Ohabolana.org
↑ "Taona, taon-kafa ... volan-kakafotra", ao amin'ny Newsmada.
↑ Arnold Van Gennep, Tabou et totémisme à Madagascar, Paris, 1904, p.263
↑ Miarantsoa Anicet, "Tsy taom-baovao" ao amin'ny Tononkalo malagasy.
↑ Leonard Fox (ed.), Hainteny: The Traditional Poetry of Madagascar, Bucknell University Press,U.S., 1990, p. 272.
↑ "Tenin’ny filohan’ny fikambanana Iray, Andriamatoa Eris Rabedaoro", in http://www.iraymadagasikara.mg
↑ "Fomba sy kolontsaina: miketrika ny hamotina ny firenena ny volambita", in Newsmada.com, 23 Septambra 2017.
↑ "Volambita", ao amin'ny Rakibolana malagasy.
↑ "Ny taom-baovao ara-baiboly na taom-baovao malagasy dia manomboka ny volana Abib (Marsa-Aprily)" - Ndriana Rabarioelina in Ny Jiosy eto Madagasikara.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Taom-baovao_malagasy&oldid=1036527"
Dernière modification le 24 Aogositra 2021, à 09:12
Voaova farany tamin'ny 24 Aogositra 2021 amin'ny 09:12 ity pejy ity.